FAQs - Vecano Electronics Co, Ltd.
Kana iyo nhare mbozha jammer iri kushanda, dzimwe nhare dzinoratidza chiratidzo. Nei izvi?
Kana nhare yekudzivirira nhare iri kushanda, pane mikana miviri yechiratidzo chinoratidzwa parunhare:
Chekutanga ndechekuti mbozhanhare inogona kubatana. Kana nharembozha ikabatana, zvinoreva kuti nzvimbo inodzivirirwa haisati yasvika pakudzivirirwa zvine hunyanzvi uye pane zvabuda. Zvino zvinoreva zvakare kuti yako yazvino nhare mbozha inodzivirira zvigadzirwa haigone kusangana nezvinodzivirirwa zvesaiti yako;
Imwe ndeyekuti mbozhanhare haigone kubatana. Kana zvirizvo, zvinoreva kuti nharembozha iri munzvimbo yakaoma, uye izvi zvinoitika panharembozha zvine simba kupokana nekukanganisa uye nekunzwa kwakanyanya.
Ndichiri kukwanisa kusevha paInternet mushure mekunge nhare mbozha yechikoro yavharwa?
Mazuva ano, zvikoro zvakawanda zvakaisa nhare dzekuchengetedza nhare. Mushure mekudzivirira kuvhurwa, ko vadzidzi vevadzidzi vanogona kuenda online here?
Kazhinji kutaura, kune nzira nhatu dzekufambisa paInternet panhare mbozha.
Nzira yekutanga ndeyekufambisa paInternet kuburikidza nemasaini efoni. Pakangovhurwa mudziyo unodzivirira, nharembozha haigone kugamuchira chiratidzo cheanoshanda, izvo zvinotungamira mukusakwanisa kufona kana kutumira mameseji, uye nenzira yechisimba haikwanise kupinda paInternet. Iko kudzivirirwa kunoshanda.
Nzira yechipiri ndeyekubatanidza nharembozha kuWIFI kuti uone Internet. Kana iwe uine rombo rakakwana, iyo jammer haina kutakura basa rekudzivirira iyo 2.4gwifi chiteshi, saka makorokoto, kunyangwe iwe usingakwanise kufona nekutumira mameseji, asi ini ndine network pasi, QQ uye WeChat izwi nevhidhiyo zvinogona kuitiswa, kutarisa mabhaisikopo uye kutamba mitambo hakuna dambudziko. Nekudaro, kana iyo inodzivirira chishandiso ichitsigira wifi inodzivirira basa, saka iyo Internet haigone kuwanikwa mune ino kesi, uye iyo yekudzivirira inoshanda.
Nzira yechitatu kuendesa chiteshi cheLAN chewired network zvakananga kunhare mbozha. Iyi nzira yakafanana nekupinda munyika yeasina munhu, kungofanana nekombuta yakabatana yakanangana netambo yedhijitari, zvisinei kuti nhoo yakavhurwa here kana kuti kwete, hapana chipingaidzo, uye netiweki kumhanya kwakatsetseka. Asi kana pasina LAN interface pane yekunze network, ichadaidzwa kwete mazuva ese, uye hazvishande.
Chero zvazviri, iro basa hombe semudzidzi kudzidza, kushanda nesimba uye kudzidza nesimba, ramangwana rako ndiyo ramangwana renyika.
Nei pasina chiratidzo chejammer mundege?
Kunyangwe hazvo jammer ichinzi "jammer" chiratidzo, inonyanya kunzi "jammer" uye nejammer rine simba guru.
Chikonzero nei nhare mbozha dzisingakwanise kushandiswa mundege ndeyekudzivirira masaini efoni kubva mukukanganisa kutaurirana kwendege Kuisa "jammer" zvinoreva kuisa dura hombe rekupindira. Naizvozvo, panenge pasina chigadzirwa chakadai mundege!